Isetyana lobusi elenzelwe into eyimfama abavelisi kunye nabanikezeli - China icandelo lobusi eliyimfama elenza into yelaphu
Amandla aSebenzayo aMgceni weSelfrey Shades Ilaphu laseKhaya
Ilaphu leemfono zeeselfowuni luhlobo olutsha lokhuselo lokusingqongileyo lwefestile yezinto zokwakha. Uyilo oluyingqayizivele luvumela umoya ukuba ugcinwe kumaleko angenamngxuma, ogcina iqondo lobushushu elingaphakathi kwaye ligcine iindleko zombane zesixhobo sokupholisa umoya. Ukusebenza kwayo kwe-anti-ultraviolet kunye ne-thermal kukhusela ngokufanelekileyo izinto zasendlini, unyango lwe-anti-static, olulula ukuhlamba. Intambo ifihliwe kumaleko wokukroba kwaye inembonakalo egqibeleleyo. Ilula kwaye iyasebenza ngakumbi kunamakhethini emveli.
Sinikezela ngeesampuli zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngqo ngaphambi komyalelo. Ngaphezu, amalaphu zethu zizityebi ngombala kwaye silandele intsingiselo fashion ngamazwe.
Ngentambo ephezulu engenazantsi ezantsi phezulu kwiHoneycomb Blind Fabric emnyama
Ubumfama bencindi yobusi benziwe ngokwendlela yobusi. Kuba “ubusi” benza umqobo owahlukileyo, umoya uhlala kwi "honeycomb", wongeze amandla okonga amandla angenakulinganiswa namanye amakhethini. Uyilo oluyingqayizivele lwe "honeycomb" lobume be-honeycomb blinds lugcina ulungelelwaniso lobushushu bendlu, lukhusela kwaye lugcina lufudumele, kwaye lwenza imvakalelo yobushushu ebusika kunye nokuphola ehlotyeni. Amalaphu okudlulisa ukukhanya ahlukeneyo, ulwakhiwo lobusi, imibala, kunye neendlela zokusebenza zizisa ukhetho ezahlukeneyo kwaye ziphindwe kabini intuthuzelo yasekhaya.
Sinikezela ngeesampulu zasimahla ezikhoyo ukuba ujonge umgangatho kwaye ukhethe umbala ngqo ngaphambi komyalelo. Ngaphezu, amalaphu zethu zizityebi ngombala kwaye silandele intsingiselo fashion ngamazwe.
Isisele esiphindiweyo seHoneycomb Blinds Ilaphu Semi-Blackout
Ilaphu lobusi eliyimfama liluhlobo olutsha lwezinto eziluhlaza ezikhusela ukhuseleko kwindalo esingqongileyo. Uyilo oluyingqayizivele luvumela umoya ukuba ugcinwe kumaleko angenamngxuma, ogcina iqondo lobushushu elingaphakathi kwaye ligcine iindleko zombane zesixhobo sokupholisa umoya. Yenza lula ikhethini yengubo yendabuko, inike abantu umbono wokukhawuleza, ukusebenza kakuhle. Uncedo kukuba xa i-honeycomb blind ivaliwe, indawo ekuvalwa kuyo ifestile incinci, ukuze ufumane indawo enkulu ngaphakathi.
Ukuhlala okungenazingcingo kweFolder Window Blinds Ilaphu
Iifestile ezifestile ezifestile ziye zathandwa eYurophu. Emva kokwaziswa e-China kule minyaka idlulileyo, zihlala zisetyenziswa kwiivillas, kwindawo yokugcina izinto kunye nasemakhaya. Izibhengezo zelaphu zibunjiwe ngokusisigxina ngokucinezela okushushu, zizinzile kwaye akukho lula ukuziqhekeza. Ke ngoko, akukho mfuneko yokuba nexhala lokuba ifestile evaliweyo iyimfama yelaphu iya kukhubazeka emva ngokusisigxina kwaye ilahlekelwe yimbonakalo yayo yoqobo. Ukongeza, ukucoceka kunye nokugcinwa kwento eyimfama yeefestile eyilaphu nayo ilula kakhulu, kufuneka kuphela ukuba usebenzise izixhobo zokungqinga iintsiba okanye usebenzise isomisi seenwele okanye isicoci sokucoca. Ungaze uyisuse kwaye uyihlambe emanzini.
Indwangu yeHoneycomb eyimfama eNtofontofo yeOfisi
Ilaphu lobusi eliyimfama lenziwe ngokwendlela yobusi. Yahlulahlulwe yangamacandelo amnyama kunye neecala lokucima umbane. Ilaphu elimnyama elingacimekiyo lobusi eliyimfama lidibanisa umsebenzi kunye nobuhle be-honeycomb blinds ilaphu kunye noyilo lwelaphu eliyimfama elingaqhelekanga. Yimveliso yokuhombisa efestile egqibeleleyo. Imfama yobusi iyaboyisa ubuthathaka bomkhusane ocoliweyo ngenxa yokunyuka kobude kunye nobunzima obukhokelela ekulungelelanisweni komzimba wekhethini, ukuze umzimba ongaboniyo uhlale uhambelana kwaye umbala ungabinamthungo.
Ukonga umbane kwiHoneycomb Blinds Fabric Semi-blackout
Iimfama ezithandwayo zeselfowuni ziye zathandwa eYurophu. Emva kokwaziswa e-China kule minyaka idlulileyo, zihlala zisetyenziswa kwiivillas, kwindawo yokugcina izinto kunye nasemakhaya. Uncedo lwelaphu eliyimfama leqela leSelfowni elilelokumfamekisa ngolu hlobo lulandelayo: Ukumelana neenyembezi, akukho mfuneko yokuqinisa, ukumelana neenyembezi zendalo, ukumelana nomoya kunye nokumelana nokusetyenziswa rhoqo. Inokukhanya okungcono kunokukhanya kwendalo, ngakumbi ukumelana nokukhanya emva kweglasi kulungile kakhulu. Ukufiphaza, ukuhambisa ukukhanya kunye nomoya.
Ukucocwa kwelaphu okungcolileyo kwamaselula nako kulula kakhulu, kufuneka kuphela ukusebenzisa i-dusters yeentsiba okanye ukusebenzisa isomisi seenwele okanye isicoci sokucoca. Ungaze uyisuse kwaye uyihlambe emanzini.
Amaxabiso eFektri amaXabiso oMbane oMda oMabili oLuhlu lweHoneycomb yeOfisi
Ilaphu lobusi eliyimfama liluhlobo olutsha lwezinto eziluhlaza ezikhusela ukhuseleko kwindalo esingqongileyo. Ubume beqela leqela leenyosi eliyimfama lilula kwaye isitayile sityebile, sivumela abasebenzisi ukuba bakhethe ngokukhululekileyo ngokweemfuno zesithuba kunye neatmosfera, ukudala amabinzana endawo atyebileyo ekhaya. Umsebenzi ofanelekileyo wokugquma isandi wenza ukuba igumbi lithule kwaye lihlale kamnandi. Ilaphu lobusi liphathwa kubushushu obuphezulu kwaye alizange likhubazeke, linyangwe ngokunyanga ukungcolisa kunye nokunyanga okunganyangekiyo, kulula ukulicoca.
Imfashini kunye neMfono ephindiweyo yeselfowuni yeHoneycomb Blind Fabric
Ilaphu lobusi eliyimfama liluhlobo olutsha lwezinto eziluhlaza ezikhusela ukhuseleko kwindalo esingqongileyo. Uyilo oluyingqayizivele luvumela umoya ukuba ugcinwe kumaleko angenamngxuma, ogcina iqondo lobushushu elingaphakathi kwaye ligcine iindleko zombane zesixhobo sokupholisa umoya. Ikwanayo nenkqubo yokusebenza eyahlukileyo, intsebenzo ethembekileyo kunye nokusebenza kakuhle. Uncedo kukuba xa i-honeycomb blind ivaliwe, indawo ekuvalwa kuyo ifestile incinci, ukuze ufumane indawo enkulu ngaphakathi.
Isampulu yasimahla yeCordless Cellular Shade Fabric 20mm
Iiseli shades ziye zathandwa kakhulu eYurophu. Emva kokwaziswa e-China kule minyaka idlulileyo, zihlala zisetyenziswa kwiivillas, kwindawo yokugcina izinto kunye nasemakhaya. Uninzi lwelaphu elenziwa ngeeselfowuni lwenziwe ngelaphu elingalukwanga, kwaye umphezulu uthe tyaba, oneziphumo ze-anti-ultraviolet, uthuli kunye nokufuma. Ilaphu le-shades yeselfowuni liphathwa ngenkqubo ekhethekileyo yokuthintela umbane ongagungqiyo, iqabaka, kunye namanzi, kwaye akukho lula ukuqokelela uthuli kunye nexoshomba, kwaye kulula ukuyicoca nokuyigcina.
Ubungakanani bengubo yeselfowuni yelaphu ilungile, kwaye kukho imibala eyahlukeneyo eyahlukileyo eya kukhethwa. Iisampulu zasimahla zikwakhona ukuba ujonge umgangatho kwaye ukhethe umbala ngqo ngaphambi komyalelo.
Ubushushu Resistant Soundproof Honeycomb Blinds Ilaphu Semi-Blackout
Ilaphu lobusi eliyimfama liluhlobo olutsha lwezinto eziluhlaza ezikhusela ukhuseleko kwindalo esingqongileyo. Uyilo oluyingqayizivele luvumela umoya ukuba ugcinwe kumaleko angenamngxuma, ogcina iqondo lobushushu elingaphakathi kwaye ligcine iindleko zombane zesixhobo sokupholisa umoya.
Eli laphu antistatic, akukho adsorb amasuntswana eqinileyo emoyeni, kwaye ayihambelani eluthulini.
Ubungakanani buhlala buhleli, izinto zelaphu zimisela ukuba azinakulungiswa kwaye ayizukukhubazeka, kwaye iya kugcina isicaba sayo ixesha elide.
Ukucoca ilaphu le-honeycomb kukwalula kakhulu, kufuneka kuphela ukusebenzisa i-dusters yeentsiba okanye ukusebenzisa isomisi seenwele okanye isicoci sokucoca. Ungaze uyisuse kwaye uyihlambe emanzini. Kuyacetyiswa ukuba isomisi seenwele sivulwe ngomoya obandayo.
Uyilo lwala maxesha lweHoneycomb yeLinen eye Blinds Ilaphu yeevenkile zokutyela
Iimfama ezithandwayo zilungele amagumbi okulala, amagumbi okuhlala, amagumbi okufundela, amagumbi okutyela, iilifti kunye nezinye iindawo. Ilaphu eliyimfama elincincileyo liphefumlelwe uyilo lolona lwakhiwo lufezekileyo kwihlabathi-uyilo lobusi. Ubume obuyingqayizivele be-honeycomb bungenza uluhlu oluthile lomqobo kwi "honeycomb" engenanto Vumela umoya uhlale "kwi-hole hole" (i-air static layer), ukugcina ngokufanelekileyo ukulinganisela kweqondo lokushisa kwangaphakathi, ukufudumeza ubushushu kunye nokufudumala, kwaye wenze ukupholisa Ihlobo kunye nendawo efudumeleyo yobusika.
Uyilo olutsha lweHoneycomb yoLungiso lweeKrisimesi ezingama-38mm
Amakhethini omzimba okanye iimfama ziye zathandwa eYurophu. Emva kokwaziswa e-China kule minyaka idlulileyo, zihlala zisetyenziswa kwiivillas, kwindawo yokugcina izinto kunye nasemakhaya. Ukucocwa kwelaphu lekhethini lilula kakhulu, kodwa nceda uqaphele ukuba le ndlela ayinakusetyenziswa gwenxa, sihlala sidinga ukusebenzisa izixhobo zokucoca iintsiba okanye izixhobo zokucoca ezithambileyo. Okanye sebenzisa isomisi seenwele okanye isicoci sokucoca. Ungaze uyisuse kwaye uyihlambe emanzini. Kuyacetyiswa ukuba isomisi seenwele sivulwe ngomoya obandayo. Sebenzisa ilaphu elithambileyo okanye isiponji esimanziswe ngamanzi ashushu ukusula amakhethini. Ukuba kukho imfuneko, yongeza isepha esicocekileyo, wosule ngobunono ukuthintela ukushwabana.